L.U.C.A.: The Beginning (2021) Complete – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Original name루카: 더 비기닝
StarringAhn Chang-hwan, Ahn Nae-sang, Go Jin-Soo, Han Kyu-Won, Hwang Jae-yeol, Jeong Da-eun, Jin Kyung, Kim Min-Gwi, Kim Rae-won, Kim Sang-ho, Kim Sung-oh, Lee Da-hee, Lee Hae-yeong, Lee Joong-ok, Moon Jung-Dae, Park Hyuk-kwon
Synopsis of L.U.C.A.: The Beginning (2021) Complete
Ji Oh ဆိုတဲ့အမြိုးသားက သူ့ခံစားခကျြတှကေို သူမြားတှဆေီထုတျပွခဲတဲ့လူတဈယောကျပါ။
Gu Reumဆိုတဲ့ အမြိုးသမီးကတော့ သူလုပျမယျလို့ဆုံးဖွတျထားတဲ့အရာတဈခုကို
ပွီးဆုံးသညျအထိလုပျဆောငျတတျသူပါ။ ငယျစဉျကတညျးက မိဘနှဈပါးကပြောကျဆုံးသှားခဲ့ရပွီး
သူကွီးလာတော့ စုံထောကျဖွဈတဲ့အခါ မိဘနှဈပါးရဲ့ပြောကျဆုံးမှုနောကျကှယျက အမှနျတရားကိုဖျောထုတျဖို့ကွိုးစားပါတော့တယျ။
စုံထောကျ Gu Ruemတဈယောကျ ထူးခွားတဲ့စှမျးအားပိုငျရှငျ Ji Ohနဲ့တှတေဲ့အခါမှာတော့
LUCA ဆိုတဲ့ဇာတျလမျးတှဲမှာတော့ မငျးသားJi Ohအနနေဲ့ Kim Rae-Wonက ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပွီး
စုံထောကျမလေးGu Ruemနရောမှာတော့ မငျးသမီး Lee Da-Heeက ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတာဖွဈလို့
Ji Oh ဆိုတဲ့အမျိုးသားက သူ့ခံစားချက်တွေကို သူများတွေဆီထုတ်ပြခဲတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။
Gu Reumဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးကတော့ သူလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကို
ပြီးဆုံးသည်အထိလုပ်ဆောင်တတ်သူပါ။ ငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘနှစ်ပါးကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရပြီး
သူကြီးလာတော့ စုံထောက်ဖြစ်တဲ့အခါ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ပျောက်ဆုံးမှုနောက်ကွယ်က အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။
စုံထောက် Gu Ruemတစ်ယောက် ထူးခြားတဲ့စွမ်းအားပိုင်ရှင် Ji Ohနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့
LUCA ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့ မင်းသားJi Ohအနေနဲ့ Kim Rae-Wonက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး
စုံထောက်မလေးGu Ruemနေရာမှာတော့ မင်းသမီး Lee Da-Heeက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်လို့
ProductionH house, Studio Dragon
Firt air date2021-02-01
Last air date2021-03-09
Episode runtime68 min
Home PageL.U.C.A.: The Beginning (2021) Complete
Start-Up (2020) Complete
Voice (2017) Season2Complete
Vincenzo (2021) Complete
Gunman in Joseon (2014) Complete
I Can Hear Your Voice (2013) Complete